रिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीका प्रतिनिधिबीच शनिबार राति भएको १२ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।आइतबार बिहान ११ बजे डा. केसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यससँगै वरिष्ठ चिकित्सक केसीले २२ दिनदेखि जारी सत्याग्रह तोडेका छन्। केसीका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहका अनुसार केसीले जुस पिएका छन्। '१२ बुँदे सम्झौतापत्रमा…
नेपालका प्रमुख मिडियाहरुमा कार्यरत १० जना सम्पादकले अनशनरत डा गोविन्द केसीका मागहरुको सरकार र सरोकारवाला पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाई गर्न माग गरेका छन् । आज, १६ मंसीर विहान डा केसीलाई भेटेर उनका मागप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका सम्पादकहरुले डा केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै भविष्यमा पनि उनले आफ्नो जीवनलाई संकट पारेर…
अनशनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान) ले देशब्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।डा केसीले अनशन शुरु गरेको १९ औं दिन पुगिसकेको र उनको मुटुको चाल बिग्रिएको भन्दै गोडानले यस्तो अवस्थामा आफूहरु चुप लागेर नियमित विरामी जाँचिरहन सम्भव नहुने जनाएको छ ।सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान)…
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गोडानले २४ घण्टाभित्र सरकारले केसीका माग पूरा नगरे सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा प्रवाह नगर्ने चेतावनी दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "२४ घन्टाभित्र सहमति नभए सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निर्वाध सेवा प्रवाह हुन नसक्ने जानकारी गराउँदर्छौं ।"डा केसी अनशन बसेको १८ दिन पुग्दासम्म निकास ननिस्कनुमा राज्य…
डा‍. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली
Saturday, 26 November 2016 08:46
काठमाडौं : १४ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले आज दुई सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको छ।शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सिनेन्द्रराज उप्रेती टोलीमा छन्। केसीले उठाएका माग पूरा गर्ने विषयमा तत्काल संवाद थाल्न पनि सरकारले टोलीलाई निर्देशन दिएको छ। टोलीले केसीका…
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरुले ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन्। अनसनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गराउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकले शुक्रबार देखि ओपिडी सेवाको काम वहिष्कार गरेका हुन्।विभिन्न १० बुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै जाँदा पनि सरकारले माग पूरा गराउन…
अनसनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ । सोलिडारिटी फर डा.केसी अलायन्स ७ मंसिरमा प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरि स्वास्थ्य विग्रदै गएको जनाएको छ । डा.केसी अनसन बसेको दश दिन पुगेको छ । उनका मागका सम्बन्धमा सरकारले वास्ता नगरेको अलायन्सले जनाएको छ । अलायन्सका संयोजक डा.जीवन क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको…
डा. गोविन्द केसी दशौं अनशनमा
Sunday, 13 November 2016 13:03
काठमाडौं, कात्तिक २८ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वरिष्ठता मिचेर चिकित्शा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जमा डिन नियुक्त गरेको भन्दै डा. गोविन्द केसी आइतबारदेखि अनसनमा बसेका छन् ।चिकित्सा शिक्षामा सुधार लगायतका माग उठाउँदै पटक–पटक अनसन बस्दै आएका डा. केसीको यो दशौं अनसन हो । आइतबार अपरान्ह त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरी डा.…
Wednesday, 09 November 2016 14:05
डा गोविन्द केसीले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन् संस्थानमा डिन नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा नभएमा आफू फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डिन नियुक्तिका लागि भोली, २५ कात्तिक विहीबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् भने अन्य मागहरु दुई साताभित्र पूरा गर्न भनेका छन् । डा केसीको विज्ञप्तिःस्वास्थ्य र…
काउन्सिलले तोक्यो मेडिकल कलेजको सिट संख्या
काठमाण्डु, २० कात्तिक-नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चालु शैक्षिकसत्रका लागि शुक्रबार मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस (डेन्टलतर्फ) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले एमबिबिएसमा अधिकतम ११५ सिट र बिडिएसमा अधिकतम ५० सिट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसपटकको सिट सङ्ख्या निर्धारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सिटको…